I-OS X El Capitan izokweseka i-TRIM kuma-drive wesithathu e-SSD | Ngivela kwa-mac
UMiguel Angel Juncos | | Apple, I-Mac OS X, Izaziso, I-OS X El Capitan
Namuhla siza nezindaba ezinhle kubo bonke abasebenzisi beMac abathathe indawo yedrayivu ekwi-computer yabo nge-SSD yomuntu wesithathuNgokuqondile, uhlelo olusha lwe-OS X 10.11 El Capitan oluhlelelwe ukwethula lokhu kuwa futhi kubonakala sengathi luzosekela i-TRIM ... ekugcineni!.
Lokhu kusho ukuthi esikhundleni sokusebenzisa isilungiselelo se-TRIM Enabler ngunjiniyela uCindori no ukwesaba ukuthi akukho ukuhambisana Ngokuvuselelwa ngakunye kwe-OS X, manje umyalo wokugcina olula uzokwanela: "Sudo trimforce enable". Lo myalo usuvele uqinisekiswe ngabasebenzisi abaningana ku-beta yokuqala ye-OS X 10.11 futhi okuhle kunakho konke, kusebenza kahle.
Ukusuka ekubukekeni manje i-TRIM inikwe amandla ngokuzenzakalela yawo wonke amadrayivu e-Apple SSD kepha ikhutshaziwe kumayunithi eminye imikhiqizo (yize njengoba sibonile ukuthi ingavunyelwa), leli oda livikela ukulahleka kokusebenza futhi likhawulele ukuwohloka kwe-SSD ngokuhamba kwesikhathi. Eqinisweni, ngaphandle kwe-TRIM inkinga ukuthi ama-SSD awazi ukuthi yimaphi amabhulokhi asetshenziswayo futhi asebenza mahhala. Ama-SSD awaqondi ukwakheka kohlelo lwefayela olusetshenziswa isistimu yokusebenza kwekhompyutha futhi awakwazi ukufinyelela kuhlu lwalo lwamaqoqo angasetshenziswanga.
Ngesikhathi kuphela lapho kufanele kubhalwe idatha yokuqukethwe okukhona, i-SSD kuqala kufanele ususe lokhu okuqukethwe futhi ngalokhu isebenzisa amabhlogo kasayizi ongaguquki (ngokwesibonelo u-512K), odinga ukufundwa njalo kokuqukethwe ngaphakathi kwe-SSD ukusula amabhlogo futhi kuwenze abhalwe kabusha.
Kusho ukuthini lokhu? Yebo, okuwukuphela kwento oyitholayo i- Ukulahleka kokusebenza nokufunda / ukubhala okungadingekile okuholela ekugqokeni ngaphambi kwesikhathi kwe-SSD. Imiyalo ye-TRIM isusa ngempumelelo amabhulokhi asuswe ngaphandle kokungena ngemvume futhi, ngakho-ke uhlelo luhlala lunamabhulokhi angenalutho alungele ukuthola okuqukethwe onawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-OS X El Capitan inika amandla i-TRIM ngokuzenzakalela futhi isekela ama-SSD wesithathu
Izindaba ezinhle kakhulu.
Ngiyalujabulela ulwazi ebelusizo kakhulu. Sanibonani
Ulwazi lungisize kakhulu.
Mmmm, futhi uma ngifuna ukusebenzisa leyo nketho (qaphela ukungazi kwami ​​ngale ndaba), ingabe kulula njengokukopisha nokunamathisela umugqa ohambisanayo ku-Terminal bese ulandela imiyalo? Ngisho, awudingi ukufometha idiski nezinto?